प्रधानमन्त्री ओली एमालेको खेलकुद महासंघ कि पीएहरुको क्लव ? | Janprabhabnews
प्रधानमन्त्री ओली एमालेको खेलकुद महासंघ कि पीएहरुको क्लव ?
23rd April 2021 , 9:09 मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले ) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एमालेनिकट खेलकुद महासंघ युवासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको छ । मंगलबार (बैशाख ७) गठित महासंघ स्वकीय सचिव(पीए)हरुको क्लव जस्तै भएको छ । सबैदलाई पद दिएर माधव नेपाल समूहमा जान नदिने नीति अन्तर्गत खेलकुद महासंघमा पनि ४४ सदस्यीय जम्बो पदाधिकारीको ब्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीको संख्या तय भए पनि कस कसलाई राख्ने भन्ने टुंगो बिहीबारसम्म पनि लाग्न सकेको छैन ।
बरिष्ठ उपाध्यक्षमा परशुराम बस्नेतलाई राखिएको छ । युवासंघ र पार्टीमा महेश बस्नेतले ढिम्किन नदिएपछि बस्नेतलाई खेलकुद महासंघमा उपाध्यक्षमा थान्को लगाइएको छ । खेलकुद महासंघका पदाधिकारी आधिजसो त ओली एमालेका सांसद र मन्त्रीका पीएहरु छन् । पीएका अलावा विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरुलाई पनि ओली एमालेले खेलकुद महासंघमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पीए दीपेन्द्र दाहाललाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलका पीए प्रभातविक्रम कटवाल पनि उपाध्यक्ष भएका छन् । पूर्वसांसद विचारी यादवका पीए रामकिशोर यादवलाई सचिवमा राखिएको छ । राष्ट्रियसभाका सांसद रामचन्द्र राईका पीए दीपक न्यौपाने सचिव भएका छन् ।
उपाध्यक्ष १२ जना छन् । युनिटी ठगी प्रकरणमा मुछिएका र चितवन मेडिकल कलेजका संचालक डा हरिशचन्द्र न्यौपानेलाई अपहरण गर्न उनकै घरमा पुगेपछि पक्राउ परेका सुवास श्रेष्ठ ‘तक्ले’लाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ । युनिटी नामक नेटवर्किङ ब्यापारमा लागेर सयौंलाई ठगेका सुवास श्रेष्ठले युनिटी पार्टी नै गठन गरेका थिए ।
उनी यसअघि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सरुवा बढुवा गरिदिन्छु भन्दै धेरैको पैसा खाएको भनी बदनाम भएका थिए । खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य मेघराज पौडेललाई महासचिव बनाइएको छ । उनी पुरुषोत्तम पौडेल अध्यक्ष रहेको महासंघमा सदस्य मात्र थिए । उपमहासचिव ६ जना बनाइएको छ ।